Ali Esbati: Hadeysan xilka ka dagin Listhaug, Norwey waxay tagaysaa xaalka Sweden - NorSom News
Ali Esbati: Hadeysan xilka ka dagin Listhaug, Norwey waxay tagaysaa xaalka Sweden
Intiinii la socotay warbaahinta wadanka , waxay isbuucyadii ugu danbeeyay warbixino, muuqaalo iyo qoraalo kala duwan ka diyaarinayeen xaalka wadanka Sweden, oo meelaha qaarkood faraha ka baxay sida ay sheegeen saraakiisha Booliska wadankas. Shalay ayaa wariye iyo sawir qaade ka socdo tvga NRK laga ceyriyay, loona diiday inay waraysi ku qaadaan maqaayad kutaal xaafada Husby , isla markaana loogu hanjabay inay indhaha wax ku arki doonaan hadii aagaas lagu arko mar danbe. Arintaas oo noqotay mid aad looga hadalhayo warbaahinta wadanka iyo baraha bulshada ee sosial-mediayaha.
Booliska magaalada caasimada ah ee Stocklom ayaa sheegay inuu faraha ka baxay amaanka xaafadaha ay ku badanyihiin dadka ajaaniibta ah qaarkood. Halkaas oo ay ka dilaaceen kooxo dhalinyaro ah oo si agaasiman ugu shaqeeya howlo kriminalitet ah, aana rabin inay wax xiriir ah la sameeyaan bulshada Sweden inteeda kale. Dhalinyaradan ayaa badan kuwa ka haray iskuulka, aan helin shaqo, isla markaana lumiyay kalsoonidii ay ku qabeen systemka wadanka iyo dowladiisaba. Waxay dhagaxtuur ku bilaabaan marka ay arkaan gaari booliis ah oo kaligiis socdo, sidaas darteed booliska marka ay galayaan xaafadahaas waxay isku raacaan baabuuro badan. Qaar kamid ah culimada xaafadaas ayaa iyagana dhankooda eedeeyay booliska oona sheegay inaysan qaadin talaabo ku haboon dhibtaan, ciyaalkaas yar-yarna aysan wax cabsi iyo ixtiraam ah midna u heyn booliska.
Halkan ka akhri warbixintan oo dhamaystiran iyo muuqaalka uu diyaariyay NRK
Wasiirka isdhexgalka iyo soo galootiga Sylvi Listhaug oo ka faa iideysaneysa warbixintan uu NRK diyaariyay ayaa isla markiiba bogeeda Facebooga soo dhigtay qoraal ay ku diganayso dowlada sweden oo ay sheegtay inay siyaasad masaakiinimo ah kula dhaqmaysey qoxootiga sanadadii ugu danbeeyay, taas oo keentay in meel kamid ah dhulweynaha Sweden aanan nabad lagu mari karin maanta. Listhaug oo aad ugu taag-taagsaneysa Sweden ayaa intaas ku dartay:
Ayaga asaa fariin maldahan u diray caalamka, oo yiri qof walbaa wuxuu imaan karaa Sweden, waxa uuna sameyn karaa waxa uu rabo, una dhaqmi karaa sida uu rabo, taas oo sababtay in ay sanad gudihi ay ku dhowaad 15o 000 qof ay yimaadeen Sweden. Arintaas oo adkeyneysa in dadka intaas tiro le-eg guryo la siiyo, shaqo loo raadiyo, caruurtooda waxbarasho loo helo. Waana midaas sababta xisbiga FRP iyo dowlada Norwey ay usoo rogeen siyaasad ku dhisan in ay Norwey qaadato tiro qoxooti ah oo ku jaan go an awooda ay dowlada u leedahay in ay dadkaas dhex galiso bulshada inteeda kale. Isla markaana aan celino kuwa aan xaqa u laheyn inay wadanka joogaan, si ay wax u yeelin amaanka wadanka.
Siyaasiga Ali Esbati oo asalkiisu yahay iiraani, kana tirsan xisbiga Vänsterpartiet oo ka jawaabayay su aalo ay waydiiyeen warbaahinta wadanka qaarkeed ayaa sheegay in hadii la rabo inaysan Norwey noqon Sweden cusub, ay xilka sida ugu dhaqsiyaha badan isaga dagto Sylvi, waayo siyaasadeeda ku saleysan qoxooti naceybka waxay aakhirka keenaysaa in ay Norwey ka dilaacdo dhibaatada maanta magaalooyinka Sweden qaarkood haysata, oo ah in xaafado dhan aan la gali karin, sababo amni owgood.
Esbati oo waqti ku noolaa Norwey ayaa sheegay in Norwey cunsuriyada iyo faquuqa ajnabiga ay wax badan kaga badantahay Sweden. Asaga oo tusaale usoo qaatay in aan warbaahinta wadanka ee waaweyn aan lagu arag qof midabkuusu madow yahay. marka la reebo marka laga hadlayo howlaha ajnabiga
Wuxuu kaloo intaa ku daray in dhibaatada Sweden ka taagan ay sababaha ugu waaweyn ee keenay ay kamid tahay shaqo la-aanta haysata dhalinyarida. Hadana ay isku soo aadeen shaqo la-aanta Norwey oo soo badanaysa, Norwey oo qaadatay qoxooti tiro badan iyo Listhaug oo dhankeeda la timid siyaasad adag.
Halkan ka akhri warkan dhamaystiran (les saken på norsk her)
Previous articleProf. M.Osman Jawaari oo xili xasaasi ah Norwey kusoo wajahan.
Next articleShaqo la aanta soomaalida oo mar kale noqota mid warbaahinta wadanku ay ka hadlaan iyo rajo weyn oo muuqato